Onye bụbu ode akwụkwọ mgbasa ozi US Colin Powell nwụrụ na COVID-19 na 84
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye bụbu ode akwụkwọ mgbasa ozi US Colin Powell nwụrụ na COVID-19 na 84
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye bụbu ode akwụkwọ mgbasa ozi US Colin Powell nwụrụ na COVID-19 na 84.
Powell nwere nkụda mmụọ maka ntuli aka ndị otu ya gaa n'aka nri yana ọbụna kwado Barack Obama n'ihu ọha n'ọchịchọ ya maka onye isi ala. Powell kwadoro nkwado Joe Biden ịzọ mba ahụ, na -ekwupụta na ọ ga -abụ “onye isi ala anyị niile ga -enwe nganga ikele.”
Onye ọchịagha anọ gbara ezumike nká na onye bụbu odeakwụkwọ nke United States, Colin Powell, anwụọla n'ihi nsogbu sitere na COVID-19.
Colin Powell nọ na -anata ọgwụgwọ na Walter Reed National Medical Center.
Achọpụtara Colin Powell na ọtụtụ myeloma.
Colin Powell, onye Republican ama ama, onye bụ nwoke mbụ onye Afrịka America rụrụ ọrụ dịka Onye ode akwukwo US, nwụrụ mgbe ọ dị afọ 84, n'ihi nsogbu sitere na COVID-19.
Otu onye agha afọ iri atọ na ise nke ndị agha US, onye rutere n'ọkwa onye ọchịagha anọ tupu ọ banye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nọ na-anata ọgwụgwọ na Walter Reed National Medical Center, mgbe ọ nwụrụ, ezinụlọ ya kwupụtara taa na post na ibe Facebook ya.
Ha kwuru, sị, "Anyị furu efu di na-ahụ n'anya na nna na-ahụ n'anya, nna, nna nna na nnukwu onye America," na-agbakwụnye na agbaala ya ọgwụ mgbochi zuru oke na COVID-19, mana na ọ mechara gbuo ndụ ya.
Ezinaụlọ Powell kelere ndị ọrụ ahụike “maka nlekọta nlekọta ha”. Ekwuputara ihe kpatara ọnwụ dịka "nsogbu sitere na COVID-19." Ọ nwụrụ n'isi ụtụtụ Mọnde.
Achọpụtala onye ọchịagha kpakpando anọ lara ezumike nka nwere ọtụtụ myeloma, dị ka akụkọ mgbasa ozi siri kwuo, ụdị ọrịa kansa ọbara nke na-egbochi ahụ ike ịlụso ọrịa ọgụ.
Colin Powell rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche nke ndị isi ndị ọrụ na -ahụ maka ndị ọrụ, ọkwá kachasị elu na Ngalaba Nchebe US, n'okpuru Onye isi ala George HW Bush, ọ bụkwa onye ọdụdụ nwa na onye mbụ Afrika America nwere ọnọdụ ahụ.
Ekwuru na Powell ga-abụ onye isi ojii mbụ nke US, mgbe ewu ewu ya rịrị elu mgbe mkpọsa ndị US mere megide mwakpo Saddam Hussein wakporo Kuwait na 1990.
O mechara bụrụ onye mbụ George W. Bush Secretary nke State na, n'oge ahụ, ghọrọ onye isi ọchịchị ojii kachasị elu. Na 2003, Powell mere okwu nchịkwa ya maka ịwakpo Iraq na United Nations, na -ekwupụta ọgụgụ isi na -enweghị isi na ọchịchị Ba'athist Hussein na -akwakọba ngwa agha mbibi.
Na foto dị ugbu a, o welitere ihe nlele nke faux anthrax n'ihu Nzukọ Ezumezu nke UN, mana ọ ga-abịa nabata ihe omume ahụ dị ka “ntụpọ” na ndekọ ya. Ihe sochiri bụ agha afọ asatọ mebiri.
A na -eme atụmatụ na ihe karịrị nde ndị Iraqis nwụrụ na ime ihe ike ma ọ bụ n'ihi mwepu nke mwakpo ahụ mere, na ọtụtụ puku ndị agha America nwụrụ n'oge ọrụ US na Iraq. Ihe mwakpo ahụ wakporo butere ime ihe ike nke ọgbakọ na ịrị elu nke Alakụba Alakụba (IS, nke bụbu ISIS).
Powell nwere nkụda mmụọ maka ntuli aka ndị otu ya gaa n'aka nri yana ọbụna na -akwado ya n'ihu ọha Barack Obama n'ọchịchọ ya maka ịzọ ọkwa onye isi ala.
Powell kwadoro nkwado Joe Biden ịzọ mba ahụ, na -ekwupụta na ọ ga -abụ “onye isi ala anyị niile ga -enwe nganga ikele.”
Powell mụrụ ụmụ atọ ma nwunye ya, Alma, bụ onye ọ lụrụ na 1962, anwụwo.
Njem nleta Puerto Rico na -aga nke ọma ugbu a
Nnukwu atụmatụ maka Minista njem nlegharị anya nke Jamaica na…
Ọtụtụ puku tọrọ atọ ka Southwest kagburu ọtụtụ narị ndị ọzọ ...
Viking Cruises: Gịnị bụ ihe ọhụrụ?
Netherlands abanyela na mkpọchi ọhụrụ
Ọ dị nchebe na Paris nwere nnukwu ngagharị iwe na COVID?
Mmemme TeamMATES nke Outback Steakhouse bidoro na ...
Ọ dịkarịa ala, mmadụ 99 nwụrụ na mgbawa Sierra Leone
Ncheta nri ọhụrụ: Charcuterie Fortin ika Salami
Morocco machibidoro ụgbọ elu UK, Germany na Netherlands niile…
BuzzHub Live ọhụrụ IMEX na-enye windo na ụwa nke ...
WTM London kpughere Saudi dị ka Onye Mmekọ Premier maka 2021
eTurboNews Onye nta akụkọ na-ekwu okwu na mkpa...
Airbus: Ọmụmụ ihe ọhụrụ 100% na-adịgide adịgide…
Lufthansa Group na-akwụghachi ego ha ji ndị German…
Mmanya French: Mmepụta kacha njọ kemgbe 1970
Ụgbọ elu Hawaii ahọpụtala ndị isi njikwa ọhụrụ abụọ
Afọ ise n'ụlọ mkpọrọ German maka adịgboroja COVID-19…
Kenya dị njikere dị ka ebe ọhụrụ maka UNWTO General ...
Ndị ụgbọ elu Lufthansa Group na-agbakwunye US 440 ọhụrụ, Spain…
Disney Cruise Line machibido ụmụaka na-enweghị ọgwụ mgbochi
Ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ ugbu a na-eme mmemme gọọlfụ na spa kacha mma...
Macau GT Cup nke Sands China na-akwado